2021 मा अन्तर्राष्ट्रिय SEO सफलताको लागि Semalt सेयर चेकलिस्ट
२०२१ मा अन्तर्राष्ट्रिय एसइओ सफलताको लागि Semalt सेयर चेकलिस्ट
तपाईको अन्तर्राष्ट्रिय एसईओ सफल हुनका लागि तपाईलाई सही रणनीति चाहिन्छ। Semalt मा, हामी तपाईंलाई सफल हुन सबै भन्दा राम्रो उपकरणहरू दिन्छौं। यसले एसईओ अग्रणी रणनीतिहरूको लागि बहिष्कृत पहुँच समावेश गर्दछ। हामी केवल तपाईंलाई यी सफलता रणनीतिहरू मात्र दिदैनौं; हामी यी रणनीतिहरू कार्यान्वयन पनि गर्नेछौं। यस लेखमा, हामी तपाईंलाई एक चेकलिस्टमा केहि आईटमहरू दिन्छौं तपाईंलाई ट्र्याकमा रहन मद्दत गर्न।
धेरै वेबसाइटहरूले गत वर्षको महामारीको प्रभाव महसुस गरे। संसारभरका मानिसहरु अरु भन्दा अधिक अनलाइन अनुभव खोजे। त्यसले विश्वव्यापी बजारहरू बढाउन कोशिश गरिरहेका व्यवसायहरूको लागि नयाँ सम्भावना सिर्जना गर्‍यो।
यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय एसईओमा सफल हुन वेबसाइट म्यानेजरहरूले पृष्ठ अनुभव, यूआरएल संरचना, कुञ्जीशब्दहरू, SERP को फरक दृष्टिकोणबाट बुझ्नुपर्दछ। तपाईं अब यसलाई राष्ट्रिय वा व्यवसायको रूपमा हेर्दै हुनुहुने छैन। तपाईंले आफ्नो वेबसाइटमा आईटमहरू र सुविधाहरूको ग्लोबल प्रतिक्रियामा फ्याक्टर गर्नुपर्नेछ।
यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वेबसाइटको रूपमा बनाउनका लागि तपाईले आफ्नो कम्पनीको डिजिटल उपस्थिति निर्माण र विस्तार गर्नुपर्नेछ। त्यो हुनका लागि, तपाईं बहुक्षेत्रहरूमा बिभिन्न दर्शकहरूको अगाडि जान सक्षम हुनुपर्दछ। तपाईंले यस दर्शकहरूलाई छुट्टै ठेगाना गर्नुपर्नेछ र तपाईंको सामग्री प्रत्येकको लागि खास बनाउनुपर्दछ, विशेष गरी खोजीमा।
२०२१ मा अन्तर्राष्ट्रिय SEO सफलताको लागि आवश्यक
SEO बढेको छ र पहिले भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण भएको छ। साथै, सबै अनलाइन अनुभव को बारे मा% 68% खोजी ईन्जिनको रूपमा शुरू हुन्छ। यसले SERP लाई प्रत्येक वेबसाइटको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण ट्राफिक स्रोत बनाउँदछ।
धेरै देशहरूमा उपयुक्त रूपमा कार्य गर्नको लागि सामग्री अनुकूलन गर्नु कुनै सजिलो कार्य होइन। यसको लागि अर्थपूर्ण परिणाम हुन सामान्यतया एक ठोस रणनीति र उत्तम कार्यान्वयनको आवश्यक पर्दछ।
यो सुनिश्चित गर्न कि हाम्रा ग्राहकहरूले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय एसईओ अप्टिमाइजेसन प्रयासहरूको साथ धेरै नै उत्कृष्ट कारोबार अनुभव गर्दछन्, हामी विचारमा छिटो सूची छौं जुन हामी पोइन्टमा छौं भनेर सुनिश्चित गर्न प्रयोग गर्दछौं।
अन्तराष्ट्रीय Hreflang सेटअप
HreFlang HTML गुणधर्म हो जुन भाषा जुन वेब सामग्री प्रदर्शित हुन्छ साथै यसको पाठकको भौगोलिक स्थान पनि देखाउँदछ। एक उदाहरण हुनेछ:
माथिको उदाहरणमा तपाईले कोडको अन्त्यमा "en-ame" देख्नुहुनेछ। यसले खोजी ईन्जिनलाई (गुगल, विकी, याहू, आदि) बताउँछ भाषा र स्थान तपाईं लक्षित गर्दै हुनुहुन्छ। जब कुनै निश्चित बजार र भाषाको नजिक आउँदा यो सुविधा महत्वपूर्ण हुन्छ।
सही URL संरचना भएको
सामग्रीलाई यसको लक्षित दर्शकहरूमा पुग्नको लागि, यसको URL ccTLD (देश कोड शीर्ष-स्तर डोमेन), उपनिर्देशिकहरू, र उप-डोमेनहरूको आधारमा सिर्जना गर्नुपर्दछ। Semalt मा स्रोतहरूको साथ, हामी तपाईंको URL संरचना निर्धारणको धेरै विधिहरू छनौट गर्न सक्छौं। त्यो महत्त्वपूर्ण छ किनकि तपाईंको URL संरचना तपाईंको निपटानमा संसाधनहरू द्वारा निर्धारित गरिन्छ।
सबै भन्दा उपयुक्त दृष्टिकोण भनेको TLDs दृष्टिकोण प्रयोग गर्नु हो। यो विधि उत्तम छ यदि तपाईंसँग एकै समयमा धेरै डोमेनहरू प्रबन्ध गर्न संसाधनहरू छन्। यदि होईन भने सबडोमेन अर्को राम्रो चीज हो। तपाईं पनि उपनिर्देशिकहरू प्रयोग गर्न छनौट गर्न सक्नुहुनेछ यदि माथिका सूचीबद्ध विधिहरू मध्ये कुनै एक पनि उपलब्ध छैन।
सुधारिएको पृष्ठ अनुभव
गुगलको एल्गोरिथ्ममा हालसालका घटनाक्रमहरूले सुझाव दिन्छ कि उनीहरूले अन-पृष्ठ अनुभवलाई बढी ध्यान दिन थालेका छन्। यसको मतलब यो छ कि शीर्ष-पायदानमा पृष्ठ अनुभव पाउन महत्वपूर्ण छ यदि तपाईं यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बनाउने उद्देश्य राख्नुहुन्छ भने। एउटा क्षेत्रमा हामीले ध्यान दिएर एक राम्रो सम्झौता भनेको मोबाइल पहिलो सूचकांक हो। यसको लागि पर्याप्त तयारीले हामीलाई Google को ग्रासहरूमा रहन सक्षम गरेको छ। मोबाइल-प्रथम एक वैश्विक मुद्दा हो, जसले यसलाई हामीले सामना गर्ने मुद्दाहरूमध्ये एक बनाउँदछ। यो कुनै पनि देशको लागि हामीले तयार गर्नुपर्ने कुरा पनि हो।
मेशिन अनुवाद बेवास्ता गर्नुहोस्
के तपाईले सोच्नु भएको छ वा मेशिन अनुवाद प्रयोग गरी कोशिश गर्नु भएको छ? यो निश्चित छिटो र सजिलो देखिन्छ; जे होस्, यो यति ठूलो छैन। बजारका रूपमा जो अधिक अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरू लक्षित गर्न चाहन्छन, हामी अनुवाद प्लगइनको साथ सम्पूर्ण पृष्ठ वा साइट अनुवाद गर्नु भन्दा राम्रो जान्दछौं।
अनुवादका लागि मेशिन प्रयोग गरेपछि धेरै अनुवाद त्रुटिहरू फेला पार्न यो सामान्य छ। अब, यी त्रुटिहरू सही जस्तो देखिन सक्छ किनकि प्रत्येक शब्दले यसको सीधा अनुवाद दिएको छ। जे होस्, जब सामग्री लेखकहरू वा तपाईंको दर्शकहरूले तपाईंको वेबसाइट मार्फत पढ्दछन्, तिनीहरूले धेरै सिमान्टिक त्रुटिहरू फेला पार्न सक्छन्। जब एक भाषा अर्कोमा अनुवाद गर्ने हो, तिनीहरू धेरै भाषाहरू बारूकाहरू हुन् जुन पत्ता लगाउँदैनन् र बुझ्दैनन्।
तपाईंको साइटमा नराम्रो अनुवाद भएमा तपाईंको प्रयोगकर्ता अनुभवमा नकारात्मक असर पर्दछ, जसले तपाईंको क्रमलाई असर गर्दछ। त्यसैले Semalt मा, हामी पेशेवर स्थानीय अनुवादकहरु राख्छौं। यो सुनिश्चित गर्दछ कि तपाइँको वेबसाइटको सन्दर्भ र सन्देश एक भाषाबाट अर्को भाषामा लगिएको छ।
यसले तपाईंको ग्राहकहरूलाई वेबसाइटसँग सजिलैसँग सम्बन्धित बनाउन मद्दत गर्दछ, ठूलो प्रभाव सिर्जना गर्दछ, र तपाईंको ब्राण्ड र स्थानीय खोजी इञ्जिनको बीचमा उत्कृष्ट सम्बन्धको लागि गति सेट गर्दछ।
क्षेत्रका लागि कुञ्जी शब्दहरू खोज्दै
यद्यपि गुगलको एल्गोरिथ्म विश्वव्यापी हुन सक्छ, अर्कोतर्फ, SERP, स्थानीय स्तरमा व्यापक रूपमा फरक हुन्छ। क्यानाडामा उत्पादनहरूको खोजीले नतिजा दिन सक्छ जुन न्यु जर्सीमा हुँदा तपाईं भन्दा फरक हुन्छ।
त्यस कारणका लागि, हामीले यसको SERP विश्लेषण गर्नुपर्दछ प्रत्येक दिइएको देशको लागि यसको अनुपयुक्त किवर्डहरूको साथ आउँदछ। हामीले खोजी भोल्युममा परिवर्तनहरू र हाम्रो लक्षित श्रोताको लागि यी प्रत्येक कुञ्जीशब्दको अर्थमा निरन्तर अद्यावधिक रहन पनि आवश्यक पर्दछ।
उदाहरण को लागी, एसईओ को सबै दुनिया मा उही अर्थ छ। यद्यपि अमेरिकामा "फुटबल खेल्न सिक्नु" को बेलायतमा "फुटबल खेल्न सिक्नु" भन्दा पूर्ण अर्थ हुन्छ।
यस कारणका लागि, हामीले प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय SEO निर्माण गर्दा देश स्तरको SEO रणनीति विचार गर्न आवश्यक छ।
तपाईंको E-A-T कस्तो छ?
यदि तपाईंले E-A-T मा हाम्रा लेखहरू पढ्नु भएको छैन भने, अब यो गर्नको लागि राम्रो समय हुनेछ। E-A-T विशेषज्ञता, आधिकारिकता, र विश्वव्यापीता हो। यी एसईओ का तीन स्तम्भहरू हुन्। एक तरीका वा अन्य, तपाईंको कुञ्जीशब्दहरू, लिinking्क गर्ने, सामग्री, र अन्य सबै तत्वहरू जुन तपाईंको SEO सुधार गर्दछ तपाईंको E-A-T मा योगदान गर्दछ।
यी गुणहरू हुन् जुन तपाईं तपाईंको सामग्री मार्फत सबै प्रयोग गर्नुहुन्छ तपाईंको वेबसाइट र ब्रान्डको समग्र छवि निर्माण गर्न। कुनै पनि वेबसाइटको E-A-T निर्माण गर्दा, यहाँ केहि तत्वहरू छन् जुन हामी केन्द्रित छौं:
सम्पादकीय सामग्रीमा लेखकको नाम र जीवनी प्रदान गर्दै
पूर्ण रूपमा हटाउनुहोस्, सहि, वा कम ई-ए-टी सामग्रीको मात्रा कम गर्नुहोस्
एक व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्यको साथ ब्रान्ड निर्माण गर्दै
वेबसाइटको प्राविधिक सुरक्षालाई अनुकूलन गर्दै
प्रयोगकर्ता-उत्पन्न सामग्री मध्यम प्रयोग गर्दै
अर्थपूर्ण सम्बन्ध निर्माण
हो, लिंक निर्माण महत्त्वपूर्ण छ, तर यी लिंकहरू कसरी गठन हुन्छन्? Semalt मा, हामी सिफारिशको फारमको रूपमा लि recognize्कहरू पहिचान गर्दछौं, र सबै भन्दा राम्रो सिफारिशहरू सम्बन्धको साथ व्यक्तिहरूबाट आउँदछन्। यस विषयमा गुगलको स्थिति यो हो कि तपाईंले लिंकहरू निर्माण गर्नु हुँदैन। त्यसैले हाम्रो अधिकार प्राप्त गर्न हामीसँग रणनीतिक दृष्टिकोण छ।
हामी धेरै लि over्कहरूमा गुणवत्ता लि links्कहरू प्राप्त गर्नमा केन्द्रित छौं। अत्यधिक सान्दर्भिक वेबसाईटबाट पाँच लिंकहरू गरीब वेबसाइटहरूबाट धेरै लिंकहरू भन्दा टाढा जान्छ। यो एउटा कारण यो छ कि ग्राहकहरू हामी सम्राट स्ट्रकमा आउँदछन् कि उनीहरूसँग धेरै आन्तरिक लिंकहरू छन् तर ट्राफिक छैन।
हामी उनीहरूलाई उनीहरूको लिate्कहरू किन्न आग्रह गर्ने अनपेक्षित लिंकन्डेड जडानहरू कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने बारे शिक्षा दिन्छौं पैसाको बर्बाद मात्र। गुणस्तरीय लिंकहरू प्राप्त गर्नका लागि अधिक प्रभावकारी तरीका भनेको तपाईंको उद्योगका मार्केटरहरू र अन्य व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्ध बनाएर हो।
एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस् कि अन्तर्राष्ट्रिय एसईओ लि links्क ब्याकलिंकको उत्पत्तिमा निर्भर गर्दै अख्तियारको बिभिन्न डिग्री बोक्दछ। सबैभन्दा अधिक आधिकारिक ब्याकलिंक्स प्रदान गर्ने देशले गुगललाई कुन देशले तपाईंको सामग्री सब भन्दा सान्दर्भिक फेला पार्छ देखाउँदछ। यसले तपाईंको स्थानीय SEO र SERP रैंकिंगमा प्रभाव पार्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय र स्थानीय एसईओ प्रवृत्ति अवलोकन गर्नुहोस्
कोरोनाभाइरसको परिणाम स्वरूप २०२० मा खोज व्यवहार र भोल्यूममा नाटकीय परिवर्तन भएको थियो। सामान्यतया, खरिदकर्ता वा खोज इञ्जिन प्रयोगकर्ताहरूको प्राथमिकताहरू निरन्तर परिवर्तन हुँदैछन्, जसले खोज प्रवृत्तिलाई असर गर्दछ। यी परिवर्तनहरूले दुबै अन्तर्राष्ट्रिय एसइओ र स्थानीय एसईओलाई असर गर्दछ।
पछिल्लो बर्षमा, खोज कुञ्जी शब्द "टाढा टाढाबाट" संयुक्त राज्य अमेरिकामा २२,२०० देखि मासिक ,०,500०० भन्दा बढी द्रुत रूपमा बढेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा त्यो 82२% वृद्धि हो। युनाइटेड किंगडममा, खोजशब्दको लागि खोजी भोल्युममा १ 175% वृद्धि भएको थियो। यसलाई परिप्रेक्ष्यमा राख्नका लागि, हामी यो बताउन चाहन्छौं कि "टाढाबाट काम गर्दै" खोजीहरूको स 4्ख्या ,,,०० बाट बढेर १२,१०० भन्दा बढी भयो। त्यसोभए यदि तपाईं एक कम्पनी हुनुहुन्छ जसले टाढाको कार्य सक्षम पार्ने सुविधाहरू प्रदान गर्‍यो भने तपाईंले अमेरिकालाई लक्षित गर्नुपर्नेछ किनकि यससँग बढी सम्भाव्यता छ।
हामी यी विकासोन्मुख प्रवृत्ति र खोजी भोल्यूमको साथमा रहनको लागि SEOmonitor र Google Trends उपकरणहरू प्रयोग गर्छौं। तीनिहरूले हामीलाई प्रत्येक बजारमा आउने प्रवृत्तिहरू निर्धारण गर्न पनि मद्दत गर्छन्।
हामी राम्रोसँग ड्राफ्ट गरिएको योजनामा ​​विश्वास गर्दछौं। जे होस्, हामी यो पनि सुनिश्चित गर्छौं कि हामी उक्त योजनालाई पूर्णतामा कार्यान्वयन गर्छौं। अब तपाईंसँग आवश्यक ज्ञान हुन सक्छ, तर तपाईं अझै यी देशहरूमा संसाधनहरूको साथ पेशेवरहरूको प्रभावकारी योजना बनाउन आवश्यक पर्दछ। हाम्रो पेशेवरहरूको टीम पनि छ र पूर्णतामा योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न।
एसईओ को दुनिया मा, यो सबै कार्यान्वयन को बारे मा। हामी सबैले यस लेखमा सूचीबद्ध गरेका छौं, हामी निश्चय छौं तपाईंको केही योजना छ। यद्यपि Semalt यहाँ तपाईंलाई मद्दतको लागि र तपाईं फाउंडेशनबाट सही प्राप्त सुनिश्चित गर्न यहाँ हुनुहुन्छ। हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, र सँगै हामी यो योजना राम्रो छ भनि सुनिश्चित गर्न तपाईंको योजनालाई हेर्न सक्दछौं र यसलाई तपाईंको विनिर्देशमा कार्यान्वयन गर्न सक्दछौं।